Layaab: Gabadh aad u Foolxun ayuu Kasoo Saaray Geenyo; Kadibna Wuu Guursaday!!! + Sawirro | Shabakada Gabooyaha
Dumarku waxay jecel yihiin markay kasoo baxaan saalada qalliinka is qurxinta iney arkaan wajigooda oo aad uga duwan kii hore loogu yaqaaney aadna uga qurux badan kii ay hore u lahaayeen, illaa qaarkood waxay doonaan in aan dadkaba laga dhex soocin mark ay qalliinka kasoo baxdo dabadeed.
Dalka Kuuriya ayaa waxa uu kaalmaha ugu horreeya dunida kaga jiray qurxita dumarka oo lagu sameeyo, iyadoo dhakhaatiirta waddankaasi ee qalliinku ay aad xariif ugu yihiin qurxita dumarka, dumarka qaalliinka ay ku sameeyaan qaarkood ayaa dhibaato kala kulma baasaaboorada dal ku galka ah oo ay wataan oo marka dambe laga rumeysan waayo iney iyagii yihiin.
Hadaba, Dhakhtar u dhashay Kuuriyada koonfureed ayaa qalliin ku sameeyay gabar foolxun oo dalkiisa u dhalatay, waxaanuu ka dhigay gabar aad u qurux badan, kadibna markii quruxdeeda uu la yaabay ayuu guursaday.
Qisadan ayaan ahayn tii ugu horreysay, waxaa horey sidan oo kale u sameeyay dhakhtar qalliin oo u dhashay dalka Mareykanka oo isna markii uu gabadhii bukaanka u ahayd ka helay guursaday.